အဖိုးတန်နှလုံးလေးကျန်းမာစေဖို့ ဘာတွေစားမလဲ..... - Hello Sayarwon
နှလုံးစည်းချက်သံလေးကို မှန်မှန်လေးကြားနေရတာက ရှင်သန်မှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ လက္ခဏာပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရှင်သန်မှုအတွက် နှလုံးကအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေတာပါ။ ဒါကြောင့် နှလုံးကျန်းမာရေးကို သေချာလေးဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုပါမယ်။ နှလုံးကျန်းမာစေဖို့ နေ့စဉ်နေထိုင်မှုပုံစံကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုသလို အစားအသောက်ကိုလည်း မေ့ထားလို့မဖြစ်ပြန်ပါဘူး။ ဒီတော့ နှလုံးကျန်းမာစေဖို့ ဘာတွေများသိထားဖို့လိုမလဲ……..
နှလုံးကျန်းမာစေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံ
နှလုံးကျန်းမာစေဖို့ဆိုရင် နေ့စဉ်နေထိုင်မှုပုံစံကို မှန်ကန်စေဖို့အတွက် ဒီအချက်တွေကို အလေ့အထလိုဖြစ်လာအောင် ပျိုးထောင်ဖို့လိုပါမယ်။
အာဟာရသင့်တင့်မျှတအောင်စားပါ စတဲ့အလေ့အထတွေကို ပျိုးထောင်ပေးပါ။
နှလုံးကျန်းမာစေဖို့ စားပေးသင့်တဲ့ အစားအစာတွေ
ဖောလိတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေတဲ့ သဘာဝဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်မျိုးပါ။ ကိုယ်တွင်းမှာ နှလုံးထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ homocysteine လို့ခေါ်တဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေ စုပုံမှုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပြီး နှလုံးကျန်းမာစေဖို့ အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ လေဖြတ်တာ နဲ့ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါတွေကင်းစေဖို့ စားပေးသင့်ပါတယ်။
ပဲအမျိုးမျိုးက သွေးတွင်းကအကျိုးမပြုကိုလက်စထရော (LDL) ကိုကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ အမျှင်ဓါတ်၊ ပရိုတင်း (အသားဓါတ်)၊ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်နေတာကြောင့် နှလုံးကျန်းမာစေသလို ခန္ဓါကိုယ်ကို ကျန်းမာစေနိုင်မှာပါ။
ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ polyphenols ပါဝင်နေတာကြောင့် နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ အမျှင်ဓါတ်၊ ဖောလိတ်၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ ဗီတာမင် A၊ ဗီတာမင် C တို့ပါဝင်နေသလို အဆီပါဝင်မှုလည်းနည်းတဲ့ အချိုတည်းစရာ သစ်သီးလေးတွေပါ။
သွေးတွင်းကိုလက်စထရောကို ကျဆင်းစေပြီး နှလုံးကျန်းမာစေနိုင်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်မျိုးပါ။
ဖလေဗာနော ပါဝင်နေတာကြောင့် သွေးကြောတွေထဲမှာ အဆီတွေစုပုံနေတာမျိုးမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပြီး ရုတ်တရက်နှလုံးရပ်တာနဲ့ လေဖြတ်တာတွေ မဖြစ်အောင် အထိရောက်ဆုံး ဟန့်တားပေးနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ခံစားမှုကို ကောင်းမွန်စေပြီး နှလုံးကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။
တစ်နေ့ကို ကော်ဖီစစ်စစ် တစ်ခွက်ပုံမှန်သောက်ပေးတာက ရုတ်တရက်နှလုံးရပ်တာနဲ့ လေဖြတ်တာမျိုးမဖြစ်အောင် အထိရောက်ဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းစေတဲ့ မနက်ခင်းသောက်စရာလေးတစ်ခုပေါ့။
Omega-3 ကြွယ်ဝတဲ့ ငါးတွေ
နှလုံးကျန်းမာစေဖို့အတွက်ဆိုရင် omega-3 fatty acids ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေတဲ့ငါးတွေကိုလည်း မေ့ထားလို့ မဖြစ်ပြန်ပါဘူး။ ဒီငါးတွေက ပရိုတင်း (အသားဓါတ်) ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေပေမယ့် ပြည့်ဝဆီပါဝင်မှုနည်းတာကြောင့် နှလုံးသွေးကြောတွေထဲမှာ အဆီတွေစုပုံတာနဲ့ နှလုံးစည်းချက်မမှန်တာမျိုး မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆယ်လ်မွန်၊ မက်ကာရယ်၊ ဆာဒင်း၊ တူနာငါးတို့ကို တစ်ပတ်ကို နှစ်ကြိမ်စားပေးလို့ရပါတယ်။
ပျော်ဝင်လွယ်တဲ့ အမျှင်ဓါတ်ပါဝင်နေတာကြောင့် နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို သိသိသာသာလျော့ကျစေနိုင်တယ်လို့ လေ့လာမှုတွေအရသိရပါတယ်။ အုတ်ဂျုံကို အခြေခံပြီးထုတ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေက သွေးတွင်းအကျိုးမပြုကိုလက်စထရော (LDL) တွကို လျော့ကျစေနိုင်တာကြောင့် မနက်စာအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် နေ့လယ်စာ အဆာပြေအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် စားပေးသင့်ပါတယ်။ စိတ်ကျေနပ်မှုရစေမယ့် နှလုံးကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြုစားစရာလေးပါ။
သွေးတွင်းကိုလက်စထရောကိုကျစေနိုင်ပြီး ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်အာနိသင်လည်းကြွယ်ဝပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးတိုးကျစေဖို့၊ ခန္ဓါကိုယ်ကျန်းမာနေစေဖို့နဲ့ နှလုံးကျန်းမာစေဖို့ သောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်လိုသူတွေလည်း သောက်သုံးပေးလို့ရပါတယ်။
ဒါတွေအပြင် အခွံမာသီးတွေ၊ အသည်း၊ ဝိုင်အနီရောင်၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဟင်းနုနွယ် နဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုပုံမှန်စားသုံးပေးတာကလည်း နှလုံးကျန်းမာစေဖို့ အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် နှလုံးကျန်းမာဖို့ဆိုရင် ဒီအစားအသောက်လေးတွေကို သင့်တင့်မျှတအောင်စားသုံးပြီး အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ အလေ့အထလေးတွေကို မွေးမြူပေးပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ helloဆရာဝန် ပရိသတ်ကြီးရေ…………….
Heart-healthy diet: 8 steps to prevent heart disease https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-disease/in-depth/heart-healthy-diet/art-20047702 Accessed Date 18 September 2019
What are the best foods for heart health? https://www.medicalnewstoday.com/articles/321820.php Accessed Date 18 September 2019